Dowladda Puntland oo raaligelin ka bixisay hadal Madaxweyne Cabdiweli uu dhawaan jeediyay oo taabanayay dadka Koonfur Galbeed - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandDowladda Puntland oo raaligelin ka bixisay hadal Madaxweyne Cabdiweli uu dhawaan jeediyay oo taabanayay dadka Koonfur Galbeed
Dowladda Puntland oo raaligelin ka bixisay hadal Madaxweyne Cabdiweli uu dhawaan jeediyay oo taabanayay dadka Koonfur Galbeed
September 26, 2018 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Madaxtooyada Puntland ee Garoowe. [Sawir Hore]
Garoowe-(Puntland Mirror) Dowladda Puntland ayaa raaligelin ka bixisay hadal Madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali uu dhawaan jeediyay oo taabanayay dadka Koonfur Galbeed.
“Puntland waxay u sheegaysaa shacab weynaha Koonfur Galbeed in Puntland iyo Koonfur Galbeed ay isku mid ka yihiin kana midaysanyihiin la dagaalanka cadawgooda Al-Shabaab, isla markaana hadalka Madaxweynuhu uu quseeyay cadowga Puntland iyo Koonfur Galbeed ee Al-Shabaab oo kaliya,” ayaa lagu sheegay bayaan kasoo baxay xafiiska madaxtooyada Puntland maanta oo Arbaco ah.
“Haddaba Puntland waxay si dhammaystiran uga raali gelinaysaa Dowladda iyo shacabka Koonfur Galbeed erayadii ay dhibsadeen ee ku jiray khudbadii Madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ee uu uga hadlayay arrimaha kooxda Al-Shabaab, gaar ahaan deegaamadii uu madaxweynuhu soo hadal qaaday.” Ayaa lugu sii yiri bayaanka.
Bayaanka kasoo baxay madaxtooyada Puntland ayaa lagu sheegay in Puntland ay maamulka Koonfur Galbeed iyo shacabkiisa la garab taagantahay xoojinta midnimadooda iyo sharaftooda kana soo horjeedo wax kasta oo dhibbaato ku ah jiritaankooda.
Hadalka Madaxweynaha Puntland ee uu kusoo hadal qaaday deegaano kuyaala Koonfur Galbeed ayuu ka jeediyay magaalada Baran ee gobolka Sanaag oo asbuucii lasoo dhaafay uu safar ku tagay.
Dad badan oo kasoo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed oo ay ku jiraan masuuliyiin dowladeed ayaa maalmihii u dambeeyay baraha bulshada kaga hadlayay hadalka Madaxweynaha Puntland oo ay sheegeen in ay aad uga xumaadeen.
Dilal loo geystay dad shacab ah oo ka dhacay Muqdisho
Maxkamada ciidamada Puntland oo dil ku xukuntay saddex xubnood oo katirsan Al-Shabaab iyo ISIS
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo bisha soo socota kulmi doona
Ankara-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa la kulmi doona dhiggiisa Mareykanka Donald Trump bisha soo socota. Erdogan ayaa sidaa ku sheegay wareysi gaar ah oo uu siiyay taleefishinka Al Jazeera shalay oo [...]
At least five Puntland soldiers dead in attack on army base in Galgala Mountains, sources say
Garowe-(Puntland Mirror) Puntland army base was attacked on Saturday evening, sources confirmed to Puntland Mirror. At least five Puntland soldiers died in the attack that lasted few hours, military sources, who requested anonymity, told Puntland [...]
Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo deegaano kuyaala gobolka Shabellaha kala wareegay maleeshiyada Al-Shabaab
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Talaado ah deegaano kuyaala gobolka Shabellaha Hoose kala wareegay maleeshiyada Al-Shabaab. Ciidanka ayaa la wareegay deegaanka Ow-dhiigle ee gobolka Shabeellaha Hoose, sida uu warbaahinta dowladda u [...]